HVLS फ्यानहरूले के गर्न सक्दछन्?
स्टाफ उत्पादकता सुधार
यस्तो देखिन्छ कि HVLS प्रशंसकको उत्पादकतासँग कुनै सरोकार छैन। केवल प्रशंसकले कसरी उत्पादकता सुधार गर्न सक्छ? सत्य कुरा के हो भने, असहज कामदारहरू अस्थिर श्रमिकहरू हुन्। हर्ष वातावरणले स्टाफको उत्पादकतामा असर पार्नुपर्दछ।
हावा स्ट्र्याटिफाइ गर्ने प्रवृत्ति हो। अर्को शब्दहरुमा, यो बिभिन्न ताप तहमा अलग हुन्छ, माथीको तातो हवा माथि र शीतल तल तल।
सुरक्षा बूस्ट गर्नुहोस्
तपाईं धेरै कारखानाहरू ठूलो आकारको उच्च गतिको छत प्रशंसकहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ ठण्डा र हवाइलाइ राख्नको लागि। यदी गति बढ्यो भने हल्लाउँदै बढ्ता गम्भीर रूपमा। हामीले धेरै किसिमका केसहरू देख्यौं, हुनसक्छ उच्च गति प्रशंसकहरू यति चाँडो र सुरक्षामा बढिरहेका छन्। तार गतिशील शक्ति भोग्न तनावग्रस्त छ। उच्च गति प्रशंसक जस्तो छैन।
सजीलै स्थापना गर्नुहोस्
तपाईं यो जान्न खुशी हुनुहुन्छ कि OPT HVLS फ्यानहरूलाई तपाईंको अवस्थित HVAC प्रणालीको संयोजनमा कुनै डक्ट work.or कामको आवश्यकता पर्दैन।
रखरखावमा बचत गर्नुहोस्
एक ओप्टि २--फुट HVLS फ्यान मात्र दुई दर्जन 36 36 इंच प्रशंसक माथि प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्न, HVLS प्रशंसकहरु लाई आफ्नो साना समकक्षहरु भन्दा धेरै कम रखरखाव आवश्यक छ। जोडी एक प्रभावशाली लामो आयु, र HVLS प्रशंसक संग एक राम्रो लगानी को परिभाषा हो।
अधिक उत्पादक कामदारहरू, अधिक भरपर्दो सूची गुणवत्ता, कम मर्मतसम्भार, र उल्लेखनीय रूपमा कम तताउने र कूलि costs लागतहरू।